Ku daabacidda khariidadaha internetka Manifold GIS - Geofumadas
Khariidadaha daabacan ee internetka leh Manifold GIS
Nofeembar, 2008 Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah
Maanta waxaan arki doonaa sida loo abuuro adeegga daabacaadda khariidada iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS IMS. Haddii aad leedahay bixiye kayd ah, ruqsadda runtime ee Manifold Enterprise waa in lagu rakibaa.
Xaaladdan oo kale ayaan isticmaali doonaa Faallooyinka, degel bixisa marti gelinta iyo adeegga daabacaadda ee xogta Manifold. Waxa jira tiro khariidado ah oo kayd ah halkaas, oo ay ku jiraan qaar lagu daray Layer Open iyo kuwo kale oo leh Flash.
1. Diyaarinta khariidada.
Waxaan diyaariyey khariidad, kaas oo leh qaar ka mid ah faylasha halkaasoo qaybo lagu keydiyo, Muuqaal Macluum ah oo laga soo ururiyey aragtiyo kooban iyo aragtiyo kooban.
2 Soo rogista khariidada la daabacay.
Waxaa jira laba siyaabood oo lagu geyn karo khariidadaha loo adeegsado Khariidadaha, mid ayaa ka mid ah bogga internetka ee la daabacay Hore ayaan u sharaxay; mid kale ayaa isticmaalaya orodka template.
Xaaladdan koowaad waxaan isticmaali doonaa kan labaad, waxay u baahan tahay oo keliya inay faylka ku shubto waxyaabaha kuxiran hal qaab oo isku buuqsan. halyeeyada, aragtida iyo xulashooyinka kale ee daabacan.
Diyaar u noqo, u sheeg isaga inuu yahay dadweynaha si dadka kale isaga u arko.
Halkan waxaad ka heli kartaa arag tusaale la mid ah, kaas oo MapServing ku hayaan muuqaal.
3 Abuuritaanka adeegyada OGC
Haddii ay dhacdo inaad isticmaasho daabacaadda ay abuurtay ASP, way kafiican tahay sababta oo ah waad aadi kartaa aaladda, oo ay kujirto abuurista adeegyada WMS iyo WFS oo si yaab leh u shaqeeya. Markaa waa suurtagal in la habeeyo haddii aad rabto marin u yeelashada dadweynaha ama kaliya koox isticmaaleyaashu gacanta ku hayaan.
Tan darteed waa inaad gelisaa faylka lagu abuuray Wwwroot, oo lagu cadaadiyey qaab .zip oo kaliya waxaad u beddeleysaa cinwaanka .map cinwaanka kombuyutarka daabacaya, «G: PrivateMaps686-641829333N5M-Filename.map»
Haddii aad isku aragto, template this ayaa digsiga gacanta ku jirin, ugu rogto wareegtaan kacay, halyeeyada iyo views waa isku mid, laakiin halkan layers ma waxa ay u qaybsamaan iyo baaritaan badan yihiin oo kooban.
Haddii aad rabto inaad ku dhejiso adeegyada wms, cinwaanku wuxuu noqon lahaa isku mid, kaliya "default.asp" waxaa lagu bedelaa "wms.asp"
Marka laga hadlayo adeegyada wfs, isla kan waxaa lagu beddelaa "wfs.asp", kaas oo lagu heli karo barnaamij kasta oo taageera heerarka OGC.
4 Waa immisa kharashka
Haddii aan ku sameynay ISP, waa inaan bixinnaa rukhsad IMS-ga ah oo soconaya $ 95, oo lagu daray kharashka martigelinta. Mapserving.com waxay adeeggan ka bixisaa lacag aasaasi ah oo ah $ 9.95 bishiiba iyada oo xaddidan fayl la gelinayo oo gaaraya 25 MB iyo 1.5 GB oo xawaare dheeri ah. Maaha wax u xun degmo doonaysa inay xogteeda halkaas ku hayso, xitaa waxay la fal-geli kartaa xog-ururinno aad u adag.
Qiimaha xiga waa $ 29.95, wuxuu u oggol yahay daabacaadda isticmaaleyaasha gacanta ku haya, kan ugu dambeeya $ 49.95 wuxuu u oggolaanayaa adeegga daabacaadda in lagu rakibo bog dibedda ah. In kasta oo ay suurtagal tahay in la codsado kordhinta iyada oo ku habboon mid ka mid ah qorshayaasha.
Iyaga oo la samaynaya ESRI waxay ku kici doontaa gacanta iyo lugta, xitaa iyadoon la isticmaalin GIS Server.
Waxa kale oo jira ikhtiyaarka ah in adeegga loo qaato 30 maalmood oo tijaabo ah, markaa haddii aad arki doontid khariidadaha, dhaqso u samee, waaba intaasoo aan adeegga sii hayaa muddo dheer… in kasta oo aan la imaanayo dhawr fikradood.
waqti MapServing ayaa dhafan adeegyada kale marti, oo ay ku jiraan GeoServer aasaasiga ah, si kastaba ha ahaatee in la tasho ay u marti qaadeen xogta GIS kala cayncayn ah u baahan tahay inaad la xiriirto iyaga.
ESRI GIS kala cayncayn ah egeomates My
Post Previous" Hore Gmail wuxuu isku xiraa Audio-Video-chat
Post Next Geofumadas, talo ku saabsan xummad hurdi ahNext »